Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 4t l1312 zom
Zoma 28 Des.
“Teo amin’ny fanompoam-pivavahana tandindona, rehefa avy nanao fanavotana ho an’ny Isiraely ny mpisoronabe, dia nivoaka izy ka nitahy ny olona tafavory. Toy izany koa i Kristy, amin’ny fiafaran’ny asany amin’ny maha-Mpanelanelana Azy, dia hiseho Izy, ‘tsy amin’ota, ho famonjena’ (Heb. 9:28), mba hitahy ny vahoaka niandry Azy amin’ny fiainana mandrakizay. Tahaka ny mpisoronabe izay nanaisotra ny ota avy tao amin’ny fitoerana masina, ka niaiky izany teo amin’ny lohan’ny osilahin’i Azazela, dia toy izany koa i Kristy, hametraka ireny fahotana rehetra ireny eo amin’i Satana, izay niavian’ny fahotana sy nampirisika ho amin’izany, Izy. Ilay osilahin’i Azazela, izay nitondra ny fahotan’ny Isiraely, dia nalefa ‘ho any an’efitra’ (Lev. 16:22); toy izany koa i Satana, hitondra ny heloky ny fahotana rehetra izay nampanaoviny ny vahoakan’Andriamanitra izy ka ho tanana mandritra ny arivo taona ety an-tany, izay ho lao amin’izay, tsy hisy olona, ary amin’ny farany dia hizaka ny sazy feno noho ny fahotana ao amin’ny afo izay handringanana ny ratsy fanahy rehetra.” — HM, tt. 501,502.
“Ny tahotra andrao hahatonga ny lova mandrakizay ho ara-nofo loatra dia nanosika olona maro handray ho ara-panahy ireo fahamarinana izay mitaona antsika hibanjina ny lanitra ho fonenantsika. Nanome toky ny mpianany i Kristy fa handeha hamboatra fitoerana ho azy any amin’ny tranon’ny Ray. Ireo izay manaiky ny fampianaran’ny tenin’Andriamanitra dia tsy avela tsy hahalala tanteraka ny mikasika ny fonenana any an-danitra.... Tsy ampy hahalaza ny momba ny valisoan’ny marina ny fitenin’olombelona. Izay hahita azy ihany no hahafantatra azy. Tsy misy saina voafetra afaka hahatakatra ny voninahitry ny Paradisan’Andriamanitra.” — HM, t. 702.
1. Misy fihevitra fototra telo (miaraka amin’ny fiovana sasantsasany) eo anivon’ny fiangonana kristianina mikasika ny arivo taona: (1) maneho ny vanim-potoana eo anelanelan’ny fiavian’i Kristy voalohany sy ny fiaviany fanindroany izany; (2) fotoana lava be anjakan’ny fiadanana sy ny fahamarinana eto an-tany mialoha ny hisehoan’i Kristy izany, fiadanana sy fahamarinana izay vokatra, amin’ny ampahany, ateraky ny fitoriana ny filazantsara sy ireo fanavaozana ara-tsôsialy; ary (3) ny arivo taona dia hitranga aorian’ny fiverenan’i Kristy, ary any an-danitra no hiseho izany. Ny fihevitra fahatelo, araka ny efa hitantsika, no tanan’ny Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito, ka any an-danitra, fa tsy eto an-tany (araka ny hevi-diso inoan’ny sasany), no isehoan’izany arivo taona izany. Inona ireo olana miseho raha ireo fihevitra hafa no safidina?
2. Vakio ny Apôk. 21:27. Inona no fantatrao mikasika io tsy fahazoana miditra ao Jerosalema vaovao io? Misy fanavahana hafa ankoatra ireo ve, dia inona no antony?
3. Saintsaino maharitra ny fiezahan’ny olombelona hamorona “nofinofy.” Inona, ohatra, no tonga ao an-tsainao? Inona ireo vokatra naterak’ireny nofinofy ireny? Nahoana no tsy tanteraka foana izy ireny? Ary nahoana no manambara amintsika ny tsy fahatanterahan’izy ireny fa miankina tanteraka amin’ny fidiran’Andriamanitra an-tsehatra eo amin’ny tontolo misy antsika, amin’ny fomba mihoatra ny herintsika olombelona, isika?